हिमाल खबरपत्रिका | नदी जस्ता देवकोटा
सन् १९५६ मा नयाँदिल्लीमा भएको एशियाली लेखक सम्मेलनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका साथमा माधवप्रसाद घिमिरे (बायाँ) ।
सबैमा देशप्रेम थियो र देशप्रेम साहित्यको एउटा मुख्य विषय हुन्थ्यो । म गीत लेख्दै थिएँ । ‘गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख उचाली जय जय जय नेपाल...’ पछि मलाई देवकोटाजीकै शब्द ‘सुन्दर शान्त विशाल’ लेख्न मन लाग्यो । लेखें । लेखेपछि झ्न् मिले जस्तो लाग्यो । केही दिनपछि देवकोटाजीसित वीर अस्पताल छेउमा भेट भयो । भनें, “कविजी, तपाईंको निबन्धका तीनवटा शब्द त मैले गीतमा पो राखें !”
“कुन शब्द, कसरी राख्नुभयो, सुनाउनुस् त घिमिरेजी”, उहाँले सोध्नुभयो । मैले गीत सुनाएँ । उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो, “राम्रो ! राख्नुस् राख्नुस् । मलाई खुशी छ ।”
उहाँ बित्नुभएकै साठी वर्ष भयो । म आफैं पनि निकै बूढो भएँ नि ! धेरै कुराहरू मनबाट धमिलिएर गए । तिथिमिति पटक्कै याद रहँदैनन् । कहिलेकाहीं मान्छेका नामहरू पनि सम्झिदैनन् । तर, आफ्नो मन छोएका कतिपय प्रसङ्गहरू सम्झेर अहिले पनि गद्गद् हुन्छु ।
के वाचन भन्नु र, उहाँ गडगडाउन थाल्नुभयो । सबै स्तब्ध भयौं । उहाँको त्यो निबन्धको भाव म अझ पनि सम्झ्न्छु । समयले हामीमा ल्याएको कृत्रिमताका बारेमा एक ठाउँ यस्तो भन्नुभएको थियो– कुखुराको मनको घडी उसैसित छ, ऊ आफैं समयको भेउ पाउँछ । तर हाम्रो मनको प्राकृतिक घडी बिग्रिइसक्यो । हामीले समय थाहा पाउन छिनछिनमा घडी हेर्नुपर्छ । अनि देवकोटाजी पनि भाषानुवाद परिषद्‌मा जागिरे हुनुभयो ।
त्यसपछि उहाँले लेख्दै गरेको ठाउँमा वेला वेला पानी लिएर जान थालें । खुरुखुरु लेखेको लेख्यै गर्नुहुन्थ्यो । हामीले कुरा गर्दा नसुने पनि ‘हँ’ मात्र गर्नुहुन्थ्यो । लेख्दा सामान्यतया वाक्यहरूका बीचमा सोचेको देखिंदैनथ्यो । कहिले चाहिं मसलाको रूखलाई हेरेको हेर्‍यै गर्नुहुन्थ्यो ।
नयराज पन्त जस्ता विद्वान्हरू आएका वेला पुष्करशमशेर कविता सुनाउन भन्नुहुन्थ्यो । देवकोटा गडगडाएर सुनाउनुहुन्थ्यो ।
देवकोटा शाकुन्तल लेख्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसका पहिला तीनवटा सर्ग छोटा छन्दमा लेख्नुभएको थियो । एकदिन मैले भनें, “कविजी, यस्ता छोटा छन्दका भरमा हुँदैन । आलोचकहरूले पत्याउँदैनन् । तपाईं सकिहाल्नुहुन्छ, अलि लामा छन्दमा लेख्नुहोस् न !”
उसवेलाको सोभियत संघमा पर्ने उज्वेकिस्तानको मुख्य शहर तासकन्दमा भएको अफ्रो एशियाली लेखक सम्मेलनमा जान देवकोटाजीले मलाई रोज्नु मेरा लागि ज्यादै महत्वपूर्ण घटना हो । दरबारका सरदार हंसमानले देवकोटाजीलाई भनेछन्, “राजाबाट तपाईंलाई तासकन्द सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने हुकुम भएको छ । दिल्लीमा राहदानी बनाएर जानुस् ।”
प्रतिनिधिमण्डलको दोस्रो सदस्यका रूपमा उहाँले मलाई रोज्नुभयो । त्यस सम्मेलनमा जान चाहने अरूको आशामा बज्रपात भयो । त्यसको परिणाम पछि देखियो र पछिसम्मै रह्यो । पछिका कुरा पछि गरौंला, पहिले तासकन्द सम्मेलनकै कुरा गरौं ।
उता जाने टुङ्गो भएपछि उहाँले मलाई “माधवजी कन्ट्री पेपर तपाईं तयार पार्नुहोस्” भन्नुभयो । म इन्द्रेणीको सम्पादक थिएँ, लेख्न गाह्रो थिएन । तर पनि उहाँलाई “मलाई बुँदा बताउनुहोस् न” भनें । उहाँले “लेख्नुहोस् न, पछि हेरौंला” भन्नुभयो । म पनि विदेशमा सुनाउनका लागि साहित्यको स्थिति लेख्न पाउने भएँ भनेर फुरुङ्ग परें । लेखें पनि । तर उहाँलाई सुनाउन पाइएको होइन । दिल्लीमा पुगेर पनि “मेरो खेस्रा सुन्नुहोस् न, भयो कि भएन” भनें । “भइहाल्छ नि !” मात्र भन्नुभयो ।
पहिलो दिन हाम्रो पालो थिएन । त्यसदिन बेलुका फेरि भनें, “कविजी, यो त अति भयो । प्रस्तुत गर्ने तपाईंले नै हो । कि मेरो सुन्नुहोस, कि तपाईं तयार गरेर मलाई सुनाउनुहोस् ।” अनि पो उहाँ ‘हँ’ भनेर झ्ल्याँस्स भए जस्तो हुनुभयो ।
एक त अंग्रेजीको भाषण, त्यही पनि पहिलो दिन राति र भोलिपल्ट भीडमा सुनेकाले र धेरै पुरानो कुरा भएकाले सबै सम्झन्न । तर ‘जीवनका मूल्य मान्यतामा आधारित रहे मात्र कविका कल्पनाका उडानहरू सफल हुन्छन्’ भन्ने वाक्यहरूको बडो काव्यात्मक र ओजपूर्ण प्रस्तुति अहिले पनि सम्झ्न्छु ।
पछि नेपाल फर्केपछि विदा स्वीकृत नगराई गएको भनेर हाम्रो तलब रोक्का भयो । राजा कुलपति भएको एकेडेमीबाट, राजाकै सचिवसित कुरा गरेर जाँदा विदा स्वीकृत गराउने हेक्का हामीलाई रहेन । तर बिन्तीपत्रै हाल्न लगाएर मात्र तलब दिनुपर्ने गल्ती पनि भएको थिएन । त्यो जमाना नै त्यस्तै थियो ।
म कसरी उहाँलाई पोल्थें ? प्रथमतः उहाँले मलाई लग्नुभएको थियो । हाम्रो जागिर एकै ठाउँ थियो । हाम्रो विदा र राहदानीको प्रक्रिया एउटै थियो । उहाँलाई पोलेर म कसरी चोखै रहन्थें र ? अन्त्यमा एउटा रमाइलो कुराः
प्रस्तुतिः केदार शर्मा